Florida Man Akasungwa E "Kufungidzira" Kernel.org Server | Linux Vakapindwa muropa
Florida Man Akasungwa 'Yekufungidzira' Kernel.org Server
Mumwe murume anobva kuEl Portal, Florida, akasungirwa kutyora maLinux server (kernel.org). Kunyanya inonzi Donald Ryan Austin Uye ane makore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa, uyo akatora mukana wehumwe hutera kuti awane sevha nemazita emunhu ane mvumo. Zvinotaridza kuti kupomedzerwa ndekwekupinda mumaseva anogamuchira chikuva chakakurumbira apo iyo Linux kernel inogoverwa kana.
Vakadaro maseva ari muBay Area, mune yakakura data centre uko Austin akashandisa hunyengeri hwake kupaza nekugadzirisa akati maseva, pamwe nekuisa rootkits uye mamwe maTrojans. Iwo maneja eiri server yeLinux Kernel Organisation pachayo ndivo vakaona kutyisidzira uye vakwidza aramu yeFBI kuti iongorore nyaya iyi. Vakazowana chakakonzera uye vakaiswa mumaoko evakuru kuti vabhadhare mutongo wake.
Austin akasungwa Mugovera wadarika, akabatwa panguva yekudzora kwekufamba kwenzira kunoitwa neMiami Shores Mapurisa eDhipatimendi. Nyaya iyi yakaiswa mumaoko ematare uye zvinoratidzika kuti vakasaina gwaro remadhora zviuru makumi mashanu uye vamuisa mubhero uye vachazomirazve kudare munguva pfupi inotevera. Zvisinei, Austin zvino aigona kutarisana nemakore gumi mujeri, faindi inosvika mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kana zvimwe zvikwereti.
Zvinosuruvarisa, haisi nguva yekutanga kuti vapinde kernel.org saiti, nekuti muna 2011 vakatambura zvakare kumwe kurwiswa, asi izvo zvaive zvakati wandei kusazivikanwa, nekuti zvitupa zvemamwe mitezo zvakashandiswawo kupinda uye isa malware. Ipapo ivo vakawanawo dambudziko iri mazuva gumi nemana gare gare, nekuda kwekuedza kwevakuru. Kunyangwe nanhasi uno mhosva yemhosva iyi ichiri kusazivikanwa, nekuti dhata diki kwazvo rakaburitswa uye hazviite sekunge vabata mutadzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Florida Man Akasungwa 'Yekufungidzira' Kernel.org Server
Charles bronson akadaro
Basa rekumisikidza kumashure rinoparadza vashandisi vehunhu rakundikana ……
Pindura kuna Charles Bronson
Kuguma kweOpenOffice kwaswedera
Linux inofanirwa kugara makore mangani?